क्लिनिक एक हप्तादेखि बन्द हुँदा विरामीहरु औषधी पाउनबाट बन्चित जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
क्लिनिक एक हप्तादेखि बन्द हुँदा विरामीहरु औषधी पाउनबाट बन्चित
जनबोली १७ फागुन, काठमाडौं । सेती अञ्चल अस्पतालको कुष्ठरोग क्लिनिक एक हप्तादेखि बन्द हुँदा विरामीहरु औषधी पाउनबाट बन्चित भएका छन् । नेदरल्याण्ड लेप्रोसी रिलिफको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित कुष्ठरोग क्लिनिकमा ताला लागेपछि टाढाबाट आएका विरामीहरु विना उपचार घर फर्किरहेका छन् ।
६ महिना औषधी खाएर बाँकी ६ महिनाका लागि औषधी लिन आइतबार क्लिनिकमा पुगेकी कञ्चनपुर देखतभुली गाविस ७ की जागो राना दिनभर अस्पतालमा औषधी पाइन्छ कि भनेर पर्खिरहिन् । क्लिनिकअघि टाँसिएको सूचनामा ‘हाललाई उपचार सेवा नरहेको, र औषधीका लागि सेती अञ्चल अस्पतालको बहिरंग विभागमा सम्पर्क राख्न’ लेखिएको छ । त्यसपछि बहिरंग विभागमा पुगिन्, तर त्यहाँपनि औषधी छैन भनेपछि फर्किएको रानाले बताइन् ।
यसअघि नियमित औषधी खाएर स्वास्थ्यलाभ गरेकी राना थप औषधी खान नपाउँदा रोगले च्याप्ने उनको चिन्ता छ । राना जस्तै रतनपुर गाविसबाट आएका महावीर चौधरी पनि स्वाथ्यकर्मी र औषधी नपाएपछि रित्तो हात फर्किए । दुई महिनादेखि कुष्ठ रोग विरुद्धको औषधी खान थालेपनि सदरमुकाम आउँदा पनि औषधी नपाएकोमा उनी निराश भए ।
धनगढी तारानगरस्थित नेदरल्याण्ड लेप्रोसी रिलिफ नामक गैर सरकारी संस्थाले स्वास्थ्यकर्मी र औषधी सहयोग दिने सहमति बमोजिम सन् २००९ देखि सेती अञ्चल अस्पतालमा क्लिनिक हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर फागुन ८ गते क्लिनिकमा कार्यरत सबै ६ जना स्वास्थ्यकर्मीले राजीनामा दिएपछि बन्द गरिएको हो ।
नेदरल्याण्ड लेप्रोसी रिलिफका फिल्ड कोअर्डिनेटर हिमालयदेव सिग्देल स्वास्थ्यकर्मीले संयुक्त राजीनामा दिएका कारण क्लिनिक बन्द भएको बताए । उनले एक हप्तामा सबै समस्या समाधान हुने बताए । नेदरल्याण्ड लेप्रोसी रिलिफको आन्तरिक विवादका कारण अहिले क्लिनिक बन्द भएको सेती अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. गणेशबहादुर सिंहले बताए ।